Pro-HS001 Qalabka kululeeyaha / lmpulse kululeeyaha kuleylka
Maxadinta 3.2m (10.5 ')
Alxanka Alxanka 6mm
Waqtiga wareegga 4 ~ 6 ilbidhiqsi
Awood 110V / 50 / 60Hz 15 ~ 18KW
Cadaadiska hawada 6 ~ 9 bar （kg / cm2）
Qalabka Qalabka Heerkulka kululaynta ee la hagaajin karo
Dhererka kululaynta hagaajin karo
Qalabka ballaaran Si loo shaabadeeyo agabyo kala duwan sida SMS, PP, PE, Polymer, Foil, Tyvek iyo Nylon, dhar aan tolmo lahayn, Dhar dusha sare leh oo Poly-dahaaran leh features Astaamaha amniga ee ku yaal qeybta hore iyo xagga dambe ， Ku qalabaysan noocyo kala duwan oo kululeyn ah faashad sida dhejiska, fidsan, qaloocsan iyo wixii la mid ah.
Faa'iidooyinka kaydiyaha kuleylka ee 'Presto Impulse'
❒ Si fudud u buuxi shuruudaha AAMI Level 3 & 4 iyadoo loo eegayo heerka PB70 ee joogtada ah ；
❒ Isticmaal aad u fiican oo leh PVC, PE, PU, ​​PP "dhar heerkulbeeg ah oo dahaarka leh, tolmo iyo wax aan tolmo wanaagsan lahayn ；
❒ Multilanguage taabashada shaashadda HMI oo leh xusuus cunto karinta ；
❒ Xaqiijinta Multipoint sax ah P LC xakamaynta heerkulka (± 3) P LC xakamaynta kululaynta iyo qaboojinta wareegyada alxanka joogtada ah ；
❒ Waqti gaaban oo gaaban oo leh 4 ~ 6 ilbiriqsi, waxqabad lagu kalsoonaan karo ；
❒ Astaamaha amniga ee horumarsan ee leh cadaadiska bedelka
●Dharka ilaalinta, oo ay ku jiraan goonnada go'doominta, Qalliinka qalliinka waxaa xukuma jaangooyooyin iyo habab tijaabo ah oo ay aasaaseen AAMI (The Association for the Advancement of Medical Instrumentation). ANSI (Machadka Heerarka Qaranka ee Mareykanka) / AAMI PB70: 2012 waa jaangooyada dejisa nidaamka kala soocida (heerarka 1-4) ee dharka ilaalinta ee loo isticmaalo xarumaha daryeelka caafimaadka iyadoo lagu saleynayo waxqabadka caqabadda dareeraha iyadoo la adeegsanayo habab tijaabo oo jaango'an ah
●Heerarka Ururka Mareykanka ee Horumarinta Qalabaynta Caafimaadka (AAMI) waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan shirkadaha qalabka caafimaadka inay la kulmaan heerarka caalamiga ah ee isticmaalka nabdoon ee aaladaha caafimaadka. AAMI caafimaad iskaa wax u qabso ah ANSI / AAMI PB70: 2012, Qoondaynta Waxqabadka Barbaraha Waxqabadkiisa iyo Dharka Difaaca Difaaca iyo Adeegsiga Xarumaha Daryeelka Caafimaadka, Si loogu isticmaalo xarumaha daryeelka caafimaadka si loo aqoonsado tallaabooyinka aqoonsiga ee muhiimka ah xulashada dharka ku habboon ilaalinta iyo dharka sida goonnada caafimaadka ( Shirkadaha Pfiedler, 2016). Kala soocida AAMI waxay ku habboon tahay natiijooyinka afar heer oo ah waxqabad caqabad ah, oo lagu cabiray si waafaqsan heerarka soo socda:
● AATCC 42-2017: Waxay cabireysaa iska caabinta dharka si ay biyaha u galaan (AATCC, 2018).
● AATCC 127-2017: Cabbiraadda caabbinta u adkaysiga uumiga biyaha ee hoos yimaada cadaadiska haadka (AATCC, 2017).
● ASTM F1670-17: Qiimee iska caabinta aaladaha loo isticmaalay dharka difaaca ilaa laga dhex galayo dhiiga synthetic iyadoo la raacayo xaaladaha xiriirka dareere ee joogtada ah (ASTM, 2017).
● ASTM F1671-13: Cabir soo gelida cudurada keena dhiiga iyadoo la isticmaalayo microbe ku meel gaar ah oo kujira xaaladaha xiriirka dareeraha joogtada ah (ASTM, 2013)
● Heerarka AAMI
● Heerka ANSI / AAMI PB70: Sharaxaadda heerka ugu fiican ee ilaalinta ee 2012 waxaa ka mid ah fahamka aagagga muhiimka ah ee lebbiska iyo waxa heer kasta oo waxqabad carqalad ahi ka dhigan yahay, si goonnada ugu wanaagsan loo doorto inay adeegsadaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaad.
●Aagagga halista ah ee goonnada ayaa ka kooban goonno iyo gacmo-gashi, oo labaduba ah meelaha aasaasiga ah ee halista ugu badan ugu jira soo-gaadhista dheecaannada iyo cudur-sidaha cudurada keena. Heerka sare, wuxuu sii weynaanayaa baahida loo qabo in laga hortago xannibaadda guud ee aagga muhiimka ah.
● HEERKA 1aad: Heerka ugu yar ee ka hortagga dareeraha
● HEERKA 2-aad: Heerka hoose ee ka hortaga xayndaabka dareeraha
● Heerka 3: Ka hortagga dareeraha dhexdhexaadka ah
● HEERKA 4AAD: Heerka ugu sarreeya ee dareeraha iyo ka hortagga fayraska
Warbixinta imtixaanka AAMI 3 & 4 ee shaybaarka Nelson
Waa maxay sababta aan alxanka ultrasonic?
● Farqiga u dhexeeya hoonka iyo rullaluistemadka ayaa muhiim u ah waxqabadka alxanka, inta badan alxanka ultrasonic wuxuu si cad u xakamayn karaa farqiga u dhexeeya, markaa tayada alxanka lama dammaanad qaadi karo badeecada aadka u sareysa.
● Alxanka ultrasonic wuxuu kudhowaad yahay buug gacmeed, waqtiga wareegga howshu aad ayuu uga dheeryahay daboolida kuleylka (kudhowaad laba jibaar), waxaana jiri doona qalooca waxbarasho dheer ee hawl wadeenada.
● Alxanka Ultrasonic wuxuu sababi doonaa daloollo yar yar oo pin ah oo aan la arki karin isha qaawan taas oo ku dhici doonta badeecada sababo la xiriira bakteeriyada dhexdeeda.
Baaxadda ballaarinta kululaynta
Shirkadda 'Presto Automation' sidoo kale waa bixiye xal u ah dhammaan noocyada dalabka warshadaha
Hore: Pro- 8002 mashiinka kormeerka muuqaalka oo otomaatig ah
Xiga: Bacda / mashiinka wax lagu xiro
Joogtada kuleylka kulul
Kuleyliye kuleylka kuleylka
Kuleylka u adkaysta kululeeyaha
Warshadaha kululeeyaha warshadaha
Kuleylka kuleylka la qaadan karo